कसरी युरोप माध्यमबाट एउटा Nomad रूपमा यात्रा तालिम | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > कसरी युरोप माध्यमबाट एउटा Nomad रूपमा यात्रा तालिम
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 24/07/2020)
तपाईं यदि एक एकल यात्री र तपाईं एक nomad रूपमा यात्रा तालिम गर्न चाहनुहुन्छ, त तपाईं सही ठाउँमा छौं. रेल परिभ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका को छ युरोप मार्फत यात्रा तपाईं युरोप प्रस्ताव छ सबै अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने. यो शहर हुन, वा आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य तपाईं यो सबै गरेर आनन्द उठाउन सक्छौं रेल द्वारा यात्रा.
अरु के छ त, रेल द्वारा यात्रा एक nomad छ रूपमा अन्य लाभ को धेरै. तपाईं आफ्नो समय मा सबै अनुभव प्राप्त, र रेल तपाईं सजिलै र कुनै पनि बाधाहरु बिना यो गर्न संभावना प्रस्ताव. यो कहिले काँही ढिलो हुन सक्छ, तर यात्रा को यो मोड मा कुनै तनाव त्यहाँ, जबकि विमानहरु एक सम्पूर्ण फरक कुरा हुन्. तपाईं विमानहरु संग यात्रा भने, त्यहाँ को स्थिर तनाव छ overcrowded विमानस्थलको र overzealous सुरक्षा उपाय. अरु के छ त, केही उदाहरणहरू मा, तपाईं एक रेल लिन यदि तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा छिटो प्राप्त!
यी र अन्य धेरै कारणहरूले, तपाईंको सर्तहरू मा रेल द्वारा यात्रा तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै भन्दा राम्रो कुरा हो. तपाईं यस जादुई यायावर साहसिक सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, यस लेखमा कसरी राम्रो गर्न मा तपाईं सल्लाह र सुझाव दिएर तपाईंलाई मदत गर्नेछ.
तपाईं एक Nomad रूपमा यात्रा तालिम गर्न चाहनुहुन्छ गर्दा विचार गर्न मुख्य कुराहरू
तपाईं एक Nomad साहसिक रूपमा आफ्नो ट्रेन यात्रा सुरु गर्नुअघि, तपाईं यसलाई के गर्न इच्छा छ छ, र तपाईं पैसा छ.
तपाईं एक roving हुन चाहनुहुन्छ भने रेल यात्री, तपाईं एक स्वतंत्र रूपमा वा आफ्नो घर देखि काम यदि तपाईं कुनै समस्या हुनेछ. तपाईं आफ्नो ल्यापटप गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनै पनि काम, तपाईं कुनै पनि स्थानमा यो गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि तिमी एक विश्राम लिन चाहनुहुन्छ काम देखि छुट्टी गर्न, बुद्धिमानीसाथ पैसा खर्च गर्न आवश्यक छ. राम्रो कुरा त्यहाँ मदत गर्न केही समाधान हो.
थाहा छ कि यदि Interrail वैश्विक पास चयन भन्दा 30days वा थप रेल द्वारा यात्रा. तर एकल टिकट तपाईं आफ्नो सुविधा मा युरोप को सबै भन्दा भर यात्रा गर्न मौका प्रदान, यो एक nomad गरेको सपना बनाउने. तपाईं कहाँ जाने पुग्दा र, र एक अद्वितीय परिभ्रमण अनुभव सिर्जना गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो.
तपाईंको रेल यात्रा लागि चयन जो, you can still यसरी पैसा बचत.
ट्रेन यात्रा गर्दा तपाईं Nomad रूपमा कसरी पैसा बचत गर्न
अनुभव यस प्रकार बारेमा राम्रो कुरा तपाईं बित्तिकै कम पैसा खर्च छौँ छ. यो द्वारा, हामी तपाईंलाई एउटा nomad रूपमा यात्रा तालिम गर्दा मतलब, तपाईंलाई रहन यदि तपाईं सबै भन्दा राम्रो अनुभव प्राप्त सस्तो हस्टल, आफ्नो खाना पकाउन खाना, र अधिक.
यात्रा को यो मोड लागि अप्ट तपाईं पैसा बचत हुनेछ.
सबैभन्दा पैसा ट्रेन यात्रा एक Nomad कोठा बुकिङ जान्छ जब खर्च. तथापि, तपाईं हस्टल बुक यदि, तपाईंले पैसा धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूले होटल भन्दा अधिक किफायती हुनुहुन्छ र एक अझ राम्रो र स्मरणीय अनुभव प्रदान. अरु के छ त, जब तपाईं एक्लै यात्रा, तपाईं यसलाई मा धेरै मानिसहरूलाई कुनै पनि कोठा बुक गर्न सक्नुहुन्छ, जो छ सस्ता विकल्प. र हामीलाई विश्वास, यो किनभने तपाईं अन्य जस्तै-दिमाग यात्री संग socialize मौका तपाईंले यो चाहनुहुन्छ छौँ.
अर्कोतर्फ, तपाईं चाहनुहुन्छ भने स्थानीय पूरा, तपाईंले प्रयोग गर्नुपर्छ काउच, किनभने यो तरिका तपाईं स्थानीयहरूमा रहन प्राप्त. प्लस, तिनीहरूले तपाईं आफ्नो शहर बारेमा थप बताउन र तपाईं सबै मजा ठाउँहरू भ्रमण लायक देखाउन सक्छौं.
तपाईँको बचत मा दूर खाने अर्को कुरा हो, राम्रो, खाने. तपाईं छात्रावास वा अपार्टमेन्ट आफ्नो भोजन तयार द्वारा खाना पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ. सबैभन्दा हस्टल र अपार्टमेन्ट जो तपाईं निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भान्सा प्रस्ताव. अरु के छ त, को अन्दर अन्य मौका मान्छे संग बाहिरै र केही तयार छ भोजन साझेदारी गर्न.
एक Nomad सुझाव रूपमा रेल यात्रा
तपाईं extrovert एक Nomad प्रकार ट्रेन यात्रा हुनुहुन्छ भने, हस्टल मा रहन यो तपाईं जस्तै मान्छे को लागि छ रूपमा पुजा गर्नु छौँ कुरा छ.
तपाईं अन्तर्मुखी व्यक्ति एक Nomad प्रकार ट्रेन यात्रा हुनुहुन्छ भने, के तपाईं अरूसित बाहिरै गर्न चाहनुहुन्छ भने अलि प्रयास राख्न छ छौँ. राम्रो कुरा पछि केही छ कि दिन छ, तपाईं यसलाई प्रयोग प्राप्त. अन्ततः, एक nomad यात्री हुनुको गर्दा के तपाईं अरूसित बाहिरै प्राप्त तरिका मन छौँ.
तपाईं स्थानीय संग रहन ओछ्यान सर्फिङ प्रयोग छैन; तपाईं पनि तिनीहरूलाई बाहिरै यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. अनुप्रयोगलाई बाहिर एक रात मा लिएर विदेशीहरू प्रेम स्थानीयहरूमा meetups सेट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
को Pickpockets खबरदार! रूपमा संसारमा कुनै पनि अन्य शहर संग मामला छ, युरोपेली शहर पर्यटक फाइदा लिन प्रयास गर्ने Pickpockets र अन्य अपराधीहरूलाई छ. तपाईं होसियार हुनु आवश्यक छ, र तपाईं भ्रमण गरिरहनु भएको स्थानका लागि जेबकतरा अवस्था मा पढ्नुपर्छ. सधैं अनुसन्धान अनलाइन शहर गएर अघि.
तपाईंको nomad यात्रा जीवन थप सहज बनाउन सक्छ अनुप्रयोगहरू सधैं प्रयोग. आफ्नो खर्च ट्रयाक गर्न, एकदम धेरै अनुप्रयोगहरू आफ्नो सर्वश्रेष्ठ साथीहरू हुन सक्छ.
सम्झना यात्रा प्रकाश. तपाईं एक रेल यात्रा nomad हुन जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं केवल एक सजिलो समय छौँ आवश्यक के पूरा. हस्टल तौलिया जस्तै सुविधाहरु को धेरै प्रस्ताव, hairdryers र जस्तै, त्यसैले तपाईं तपाइँको ल्याउन छैन. प्लस, तिनीहरूले सामान्यतया वाशिंग मिसिन र dryers भनेर एक यूरो वा दुई को लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ छ, त्यसैले तपाईं या त तपाईं संग धेरै लुगा लिन छैन. तपाईं सामान धेरै संग यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने, ब्याकस्पेसिङ राम्रो विकल्प हुन सक्छ.
समग्रमा, एक nomad रूपमा रेल यात्रा एक सुन्दर र परेशानी-मुक्त अनुभव छ. तपाईं सजिलै सबै मार्फत थुप्रै ठाउँमा जस्तै सुन्दर देशहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, र अधिक. प्लस, तपाईं हेर्न प्राप्त सुन्दर देहात र आश्चर्यजनक परिदृश्य प्रकृति प्रस्ताव छ. कुनै अन्य यात्रा विकल्प त्यस्तो अविस्मरणीय र रमाइलो अनुभव प्रदान गर्नेछ.
एक Nomad रूपमा एक उत्कृष्ट ट्रेन यात्रा बनाउन योजना अग्रिम र तपाईंलाई चाहिने ट्रेन टिकट किन्न, र तपाईं आफ्नो साहसिक सुरु गर्न सेट गरिने!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-nomad-europe/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#traveleurope यूरोपेन्ट्रावेल europetravel सुझाव trainjourney Tranride रेल प्रशिक्षण सल्लाह रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह रेल यात्रा यात्रा traveltips